Dawlado Carbeed Oo Bilaabey Inay Baajiyaan Dagaal Mar Kale Dhex-mara Somaliland Iyo Puntland
Wednesday May 16, 2018 - 14:52:34 in Wararka by Abdi A.
Hargeysa-(Caalami-News)-Dawladaha Imaaraadka iyo Sucuudiga ayaa dadaal xooggan u galay sidii loo baajin lahaa dagaal mar kale ka dhex qarxa ciidammada Somaliland iyo kuwa Maamul gobolleedka Puntland oo shalayo uu dhex maray dagaal uu ka dhashay khasa
Hargeysa-(Caalami-News)-Dawladaha Imaaraadka iyo Sucuudiga ayaa dadaal xooggan u galay sidii loo baajin lahaa dagaal mar kale ka dhex qarxa ciidammada Somaliland iyo kuwa Maamul gobolleedka Puntland oo shalayo uu dhex maray dagaal uu ka dhashay khasaare nafood oo badani.
Hadaba sidda wararka aanu ku helayno ayaa sheegaya in labadan dowladood ee carabta ahi uu maamulkoodu xidhiidh la sameeyay madaxda Somaliland iyo Puntland waxaanay ka dalbadeen in aan wax dagaali dhicin maanta halkaasina lagu soo afjaro colaada ka oogan Deegaankaasi.
Dhinaca kale wararka ayaa sheegaya in Dowladda Itoobiya ay iyada dadaal ugu gashay sidii loo hakiyo lahaa colaadan.
Mas’uuliyiinta ugu sarraysa dowladaha Itoobiya, Sucuudiga iyo Imaaraatka ayaa waxaa ay in khadka telefoonka kuwada hadashiiyaan Madaxwaynayaasha Somaliland iyo Puntland kaas oo qarsooni ahaa.
Shalay fiidkii ayay ahayd markii laba dhinac ee dagaalamayay uu mid waliba soo dhoobay ciidan badan dhankiisa.
Wali ma jirto wax khasaare ah oo ilaa imika ka dhacay deegaankii shalay dagaalku ka dhacay, Mana jiraan wax faah-faahin ah oo ka soo baxay labad dhinac.
Madaxwaynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa la ogayn in uu aqbalay iyo in kale waxaase jira tuhuno badan kuwaas oo sheegaya in uu muujin doono dabac siyaasadeed.
Todobaadkan gudihiisa ayuun bay ahay markii Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay uu u kala dab-qaaday labada Madaxwayne inkasta oo wax natiijo ahi ka soo bixin